दिउँसो सुत्ने बानी छ भने सावधान ! आजैबाट छोड्नुहोस
प्रकासित मिति : ६ भाद्र २०७५, बुधबार प्रकासित समय : १४:०२
मानिसहरु खाना खाएर दिउसो सुत्नमा निक्कै मन पराउछन् । दिउसो सुत्नमा जती मज्जा त केहोला ? त्यसैले मानिस दिउसो फ्री भएको समय सुतिदिहाल्छन् । तर दिसोको समय सुत्नु फाईदा हुँदैन । धेरै बेफाईदा छ दिउसो सुत्नुमा । बिएमआई (बडी मास इन्डेक्स) ३७ भन्दा धेरै हुँदा लिभर क्यान्सरको खतरा २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन जान्छ ।
दिउँसोको समयमा एक घन्टाभन्दा बढी सुत्दा टाइप टु डायबिटिजको खतरा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्छ । युनिभर्सिटी अफ टोक्योका अनुसन्धानकर्ताले हालसालै तीन लाख व्यक्तिमा गरेको अध्ययनले दिउँसो एक घन्टाभन्दा बढी सुत्दा धेरै नोक्सान हुने चेतावनी दिएको छ । यसले मुटुसम्बन्धी रोग, ब्रेन स्ट्रोक र डायबिटिजको खतरा बढ्छ ।